Reflex Labs Testolone RAD-140 5mg 90 Makapu
141 Reviews Kubva paongororo dze 141
Reflex Labs YK11 Myostine 5mg 90 Makapu
25 Reviews Kubva paongororo dze 25
Alpha Labs TLB 150 5mg 90 Makapu
6 Reviews Kubva paongororo dze 6
Reflex Labs ACP 105 5mg 90 Makapu
Wati warova bani here murwendo rwako rwekusimba? Kuvaka mhasuru hakumbofi kwakareruka, uye iwe unogona kunge uri panguva iyo zvisina basa kuti unodya mapuroteni akawanda sei kana kuti mangani reps aunoita. Unoda imwe yekuwedzera yekuwedzera kubva kune yekunze sosi. Iyi ndiyo chaiyo mhando yemamiriro ezvinhu aunofanirwa kutora maSARM ekuwana mhasuru! "Selective Androgen Receptor Modulators" (maSARM mapfupi) anonyanya-anoshanda macapuleti ekuwana mhasuru.
Yakachengeteka Imwe nzira kune Steroids
MaSAR anoshanda zvakafanana nesteroids. Asi zvakashumwa mhedzisiro zvinoramba zvakaderera zvakanyanya. Ivo vanosarudza nezve izvo zvinogamuchirwa zvavanosunga kwazviri. Ivo vanongo sunga chete kune mhasuru zvinogamuchirwa.
MaSARM eMusuru Kuwana kweMhando Dzese dzevanhu
MaSARM anoratidzwa anoshanda mukuwedzera mhasuru mashoma kune vese varume nevakadzi. MaSARM ekuwana mhasuru anogona kukubatsira iwe! Tarisa wega zvigadzirwa zvechigadzirwa kuti udzidze zvakawanda nezvekuti yega yega yemhando dzakasiyana dzeSARM.
Iwo Makomborero Akawanda emaSARM
Kuti ikubatsire kuwana mhasuru, maSARM anovandudza kutsungirira kwako, tsandanyama, simba, uye mapfupa kuwanda. Uye maSARM haangobatsire ako mhasuru. Ivo zvakare vanopa hutano mabhenefiti anovandudza hupenyu hwako hwese. Iko hakuna chikonzero chekutora PCT kutsiva kurasikirwa kwe testosterone paunenge uchitora maSARM nekuti zvigadzirwa zvedu hazvingambokanganisa yako chaiwo mazinga e testosterone.
Kunyangwe iwe usiri kutsvaga chimwe chinhu chemakwikwi epamusoro-ekumhanya, maSARM anogona kukubatsira iwe kuwana mhasuru mumuviri wako wese. Izvi zvichavandudza mashandiro ako ezuva nezuva, zviite kuti unzwe kuve nechivimbo, uye nekuvandudza hupenyu hwako hwese.
Haufanire kumirira kwenguva yakareba kuti utange kuona izvi zvinoshamisa mhedzisiro. MaSARM ekuwana mhasuru anogona kukuwanira mhedzisiro mu4 kusvika 16 mavhiki! Mushure meimwe chete gumi-nevhiki kutenderera, maSARM anogona kukupa iwe yakawedzera gumi makirogiramu emhasuru. Usabatwe nekushungurudzika muplate apo maSARM iri nyore, inoshanda, uye nekukurumidza mhinduro. Uye iwo anodhura zvakanyanya kupfuura mamwe ekuwedzera ehutano.
Wakamirira chii? Hauna chaunorasikirwa uye zvese zvaunowana - kunyanya mhasuru! Tarisa kuburikidza nesarudzo dzakasiyana Sarms Stores inopa yeSARMS yekuwana mhasuru uye tsvaga iyo inokushandira. Kana iwe usina chokwadi kwekutangira, ipa Sarms Stores kufona! Tinoda kuda kupindura mibvunzo yako.